Posted by သက်ဝေ at 10:20 PM
SDL March 3, 2010 at 10:30 PM
ဟိုဖက်ကမ်းက မီးထိန်ထိန် ဆိုတာလေးတောင်သတိရမိသေး.. :)
Bino March 3, 2010 at 10:56 PM
Last Sunday (28-03-10), I had shot some photos at same place in Singapore.
Your photos better than my photos.
khin oo may March 4, 2010 at 12:10 AM
တွဲရေးတာကောင်းပါတယ။် ရသမျိုးစုံပေါ့။ စာရေးချင်တဲ့အခါရေး ရိုက်ချင်တဲကအခါရိုက်ဘယ်လောက်ကောင်းသလဲ။ ခွဲရေးကမကောင်းဘူး။
Khaing March 4, 2010 at 12:44 AM
Really nice although u didn't use tripod!!!
အပြုံးပန်း March 4, 2010 at 12:51 AM
တိမ်တွေက အပြင်မှာ အဲဒီလို ပြာနေတာပေါ့၊ သိပ်လှတဲ့အရောင်ပဲ၊
soft ဖြစ်တဲ့ ရေနဲ့ တိမ်က မာဟန်ထင်ရတဲ့ မျဉ်းမတ်ကို ရံထားတော့ ဘက်ညီမျှနေတဲ့ ဖွဲ့စည်းမူပါပဲ၊
(ဓါတ်ပုံပညာတော့ မသိပါဘူး၊ မြင်သလို ပြောကြည့်တာပါ) :)
Moe Cho Thinn March 4, 2010 at 2:00 AM
၂ ကျပ်ခွဲက ၂သိန်းခွဲမက တန်ဖိုးရှိနေပြီ။
အနုပညာမျက်စိရှိတော့ ပိုလှတာပေါ့။ :)
ရွှန်းမီ March 4, 2010 at 2:13 AM
အပေါ်က အားလုံးပါတဲ့ပုံ အရမ်းလှတာပဲ အစ်မ.. အောက်ကတစ်ခုကတော့ အလင်းများလွန်းတယ်လို့ ခံစားရတယ်.. မျက်မှန်ကြောင့်ပဲလားမသိ..
ဘလော့တစ်ခုထဲမှာပဲ ရေးပါ.. label ကို Photo လို့ တပ်ထားပေါ့ အစ်မ.. theme တူရဲ့သားနဲ့ ၂ခုခွဲရေးရင် အလုပ်ရှုပ်နေမှာစိုးလို့ ..
ရွှေရတုမှတ်တမ်း March 4, 2010 at 8:02 AM
ချစ်ကြည်အေး March 4, 2010 at 9:00 AM
ဓါတ်ပုံဖြစ်ဖြစ် စာဖြစ်ဖြစ် အားထုတ်ရတာပါပဲ သူငယ်ချင်းရယ် တင်သာ တင်ပါ...ကြည့်ရတာပေါ့ ပုံ ၁ ကြိုက်စ်...:)
P.Ti March 4, 2010 at 10:02 AM
နှစ်ပုံစလုံးလှတယ်။ ပထမပုံကတော့ ပိုလို့ကောင်းတာပေါ့။ တိမ်တွေပါတယ်လေ။
Tripod ၀ယ်မယ်ဆို ဈေးသိပ်မကြီးပဲ ကောင်းတာ Cathay Photos မှာရှိတယ်။ Slik ဆိုတဲ့ တံဆိပ်နဲ့။ အဲဒါ တခြားဆိုင်တွေမှာမရှိဘူး...
ယောနက်သန် March 4, 2010 at 6:48 PM
sonata-cantata March 4, 2010 at 8:51 PM
နောင်တချိန်မှာ ဓာတ်ပုံစာအုပ်မျိုး လုပ်နိုင်ရင်ကောင်းမယ်။ (Burmese Design & Architectture - photography by Luca Invernizzi Tettoni စာအုပ် ဖတ်နေလို့) ရည်မှန်းပြီးသားလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပါ။ ဆရာလုပ်တာမဟုတ်ပါ။ ကင်မရာအိတ် လိုက်ထမ်းဆို ထမ်းပါ့မယ်။ :)
ဇွန်မိုးစက် March 20, 2010 at 1:27 AM
ပို့စ်ကဒ်ထဲက ပုံလေးတွေ အတိုင်းပဲ။ လှတယ်။း)
Thazin August 9, 2011 at 12:34 PM